Ndeipi nzira yakanakisisa yekuvaka backlinks muna 2016 kusimbisa bhizinesi duku SEO?
Zvizhinji zvinowanzoitika, vadzidzisi viduku vashoma vanowanzotarisana nekutambudzika nekuvakwa kwehutano hwakanaka pane imwe nzvimbo yepamunharaunda. Hapana chikonzero chekutaura kuti kujekesa nzira dzakanakisisa dzekuvaka backlinks muna 2016 zvichiri idombo rekona yemabasa makuru muSeO (Search Engine Optimization) kwevakawanda vedu. Uye imwe yenhau dzakawanda, inotarisana nevadzimai vebhizimisi vaduku, kunyanya, ndeyekudzivisa kuva ne-backlinks yakadzika muhutano hwavo hwehutano hwepawebsite. Uye isu tose tinoziva kuti magetsi makuru ekutsvaga akafanana neGoogle pachake anoenderera mberi nekutsvaga zvirongwa zvekuputsa kwekubatana kwechikwata. Zvinoreva kuti kuvakwa backlinks muna 2016 nzira yakasikwa uye yakachengeteka ichakuda iwe kuti udzivise zvose zvinotyisa Black-Hat kubatanidza maitiro, sekubatana kwekubatana (kana zvisina kudaro, kubatanidza mavhiri), kubhadhara zvikwangwani zvinowanikwa, uye zvimwe zvose zvakafanana zvakafanana uye zvinonyengera kuva nechinangwa chimwechete - kunyengera neGoogle's core ranking algorithm. Ngatitarisei - chikamu cheshumba chezviito izvi uye zvinoshandiswa hazvibviri kushanda zvakare. Nepo dzimwe dzose dzichiri dzisina ngozi, uye naizvozvo dzinogona kukuvadza iwe webhusaiti yako inoenderera mberi nekusimudzira kushandiswa mune ramangwana rakatarisika. Ndokusaka ndiri pasi apa ndichaenda kuzokuratidza runyorwa ruduku neVhite White-Hat nzira dzinotarirwa nemapurojekiti maduku eInternet sezvinonzwisisika uye anobatsira pakuvaka backlinks muna 2016. Heino ivo.
3 Smart Approaches to Building Backlinks in 2016
Kutanga uye zvakanyanya, ndinoronga kutanga pamwe nevatungamiri vepamusoro vane chokuita nekambani yako huru kana bhizinesi rebhizimisi. Semuenzaniso, unogona kumira uchibatsira kune rimwe bhuku rakakurumbira rebhuki, ugovana unyanzvi hwako, uye dzimwe nguva unobhadharwa nehutano hwepanyama hwehupamhi hwepamusoro hunoendesa kune webhusaiti yako kana blog. Kuita kudaro, yeuka kuti zvakadai zvakasimbiswa zvakanyatsowedzerwa kuvimbwa kupfuura zvese zvinotsigirwa zvigaro kana kunyange zvakagadzirirwa.
Funga kufambidzana nevana vezvematongerwo enyika (zvakadai semashoko mabhuku kana nhepfenyuro), uyewo mhemberero, zvipo, uye misangano inotaura nevanhu mune imwe nzvimbo. Sezvo muridzi webhizimisi, ndinorayira zvinangwa kune vekwavo, pane dzimwe dzimba huru kana makambani enyika yose. Nenzira iyo, haugoni kungovandudza zita rako rekutsvaga zita asi "kuwana" iyo yakakodzerwa ne-backlink yakakwirira mukudzoka.
Sei uchifanira kudzorera gumbo? Ndinoreva kuti panzvimbo yekuita dhongi-basa revhiki vhiki nevhiki, iwe unogona kungoshandisa izvo zvinoshumira makwikwi ako kana chero vamwe vatatu paWebhu, uye uvandudze pane iwe pachako iwe uchibatsirwa. Zvinhu zvose zviri nyore - tanga nekuwana zvimwe zvekuita zvakanakisisa zviri mu niche yako (Ndinokurudzira kushandisa mishandisi yeIndaneti seBuzSumo - kutsvaga mikana yehutano, uye hutsva hwekutsvaga webhusa seMo Moz Open Explorer, Semalt Analyzer, kana Screaming Frog SEO Spider ku chengetedza unhu hwekukwikwidza kwemukwikwidzi wako). Zvadaro, funga zvakanaka izvo zvingagadziriswa zvakanaka uye kugadzira chimwe chinhu chinounza kukoshesa, kana kupa ruzivo rwakadzika pamusoro penyaya imwe chete. Pane imwe nguva reworked yako yakagadzikana yakagadzirira, ikukurudzira nenzira yekufambisa - uye wapedza Source .